Chii chekutengesa muchitoro chepamhepo? | ECommerce nhau
Chii chekutengesa muchitoro chepamhepo?
Kuvhura a online store Izvo zvinonetsa, uye hazvina kufanana kuvhura chitoro chemuviri panogoneka vatengi vanogumira, kuvhura chitoro chepamhepo uko munhu wese aine internet access anogona kupinda. Uye chimwe chezvinhu zvakakosha zvekufunga nezvechitoro ichi ndeche Tichatengesa chii? Uye kana isu tatova nechakagadzirwa, mubvunzo ndewokuti, ichave yakakurumbira sei? Ngatione nhamba ye data inogona kutibatsira mundima iyi.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ongororo mhedzisiro inoisa iyo bhaisikopo nemumhanzi zvemukati semunhu wechishanu anodiwa nevanhu. Mune mamwe mazwi, kune vazhinji vashandisi vanofarira kuwana varaidzo kuburikidza nezvitoro zvepamhepo, izvi zvinogona zvakare kutiita kuti tifunge nezve mukana wekutengesa mitambo yemavhidhiyo uye nyaradzo.
Sekamuri inodiwa tinowana masuo ezviitiko zvakasiyana; Izvi zvinonakidza kwazvo, sezvo zvichiratidza kuti kune vazhinji vashandisi vanopa sevhisi inofambisa zviitiko zvavo chinhu chakakosha kwazvo, saka tinogona kufunga nezvekuvhura chitoro kuronga zviitiko, kushanya, semuenzaniso.
Zvinhu zvemumba Ivo chinzvimbo chechitatu muzvinhu zvevatengi zvavanoda, saka iri zano rakanaka kukwanisa kutengesa zvigadzirwa izvi, uye kana kugona kwedu kuchibvumira, tinogona kupa masevhisi ekumisikidza vatengi vedu
Mabhuku acho gara munzvimbo yechipiri mune runyorwa rwevanofarira, pasina mubvunzo inzvimbo inonakidza kutarisisa, uye sarudzo yakanaka kwazvo yekugona kuvhura online chitoro, Tinogona kufunga nezve chikuva chekutenga nekutengesa mabhuku akamboshandiswa, chimwe chinhu icho vanhu vanowanzo tsvaga, uye chisiri nyore kuwana.
Kana iri sarudzo yakanakisa, zvigadzirwa zvevatengi zvavanofarira, tiri kutaura nezve zvipfeko zvemitambo uye zvimwe zvinhu, chimwe chinhu chisingazombobuda musitayera uye iri sarudzo yakanaka kwazvo kuvhura yedu online chitoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Chii chekutengesa muchitoro chepamhepo?
Sei vanhu vachida ecommerce?
Ecommerce ye newbies, zvese zvaunoda kuti uzive